Helio G90: Nidaamyada ciyaaraha ee MediaTek ayaa ku dhacay suuqa | Androidsis
Helio G90: processor-ka ciyaaraha ee MediaTek waa rasmi
Telefoonada casriga ah ee ciyaaraha ayaa sii wadaya helitaanka suuqa, isla bishaan waxaan ku aragnay labo suuqa. Sababtaas awgeed, MediaTek waxay rabtaa inay sidoo kale ku yeelato qaybtan suuqan, iyada oo ay la socdaan Processor-yaasheeda Helio G90. Shirkadda ayaa horey u shaacisay dhowr toddobaad ka hor inay qorsheynayeen Daahfuraan processor-kooda u gaarka ah ee taleefannada ciyaaraha.
Shirkaddu waxay nooga tagaysaa laba jajab oo kala duwan, sida horeyba loogu dhawaaqay. Waxay ku saabsan tahay Helio G90 iyo Helio G90T. Kuwani waa laba farsamo-yaqaanno awood leh oo loogu talagalay in loogu isticmaalo taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan suuqa marka laga hadlayo arrintan. Horumar muhiim u ah astaanta.
MediaTek waxay horeyba nooga tagtay processor-ka illaa iyo sanadkaan, taas oo aan ku arki karno horumarka astaanta siyaabo badan. Hadda gasho qayb cusub oo suuq ah, taas oo aysan jirin wax joogitaan ah haba yaraatee, oo gebi ahaanba ay xukumaan Qualcomm. Waxaa loo soo bandhigi karaa inay beddel u yihiin noocyo badan oo arrintan la xiriira.
Helio P65: processor-ka cusub ee loo yaqaan 'MediaTek'
Helio G90 cusub
Kuwani processor-rada cusub ee shirkadda waxaa loo arki karaa inay yihiin isbeddellada 'Helio P90'. Dareenkan, waxa sumcadda Shiinuhu raadinayso ayaa ah inay siiso hawlwadeennada taleefannada awoodda-sare leh oo ku habboon socodsiinta ciyaaraha leh tayo garaaf sare leh. Waxaa si uun loogu soo bandhigaa inay yihiin bedel ka jaban kan Snapdragon 855. Marka waa suurtagal in Helio G90 iyo G90T waxay caan ku yihiin noocyada Shiinaha. Maxaa ka dhigi kara noocyo badan oo xishood leh oo leh casriga casriga ah.
Shirkaddu mar hore ayey nala wadaagtay xogta processor-radan cusub. Markaa waan ogaan karnaa waxa laga filan karo xagga mucaawimooyinka arrintan la xiriira, ee ka socda MediaTek. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Koorsooyinka: 2 Gacanta kiliyaha kiliyaha-A76. Ilaa 2 GHz ee Helio G90; ilaa 2,05 GHz 2 Helio G90T iyo 6 ARM Cortex-A55 ilaa 2 GHz
Habka been-abuurka: 12 nm
GPU: Hub Mali-G76 3EEMC4. 720 MHz oo ku taal Helio G90; 800 MHz oo ku taal Helio G90T.
Taageerada xalinta ilaa 2520 x 1080 pixels
Xusuusta RAM: illaa 10 GB 2133 MHz LPDDR4x oo loogu talagalay Helio G90 illaa 8 GB
Kaydinta- La jaan qaadaya eMMC 5.1 iyo UFS 2.1.
Kaamirooyinka: illaa 64 MP oo dareemayaal keliya ah ama 24-16 MP oo ku shaqeeya nidaamka laba-geesoodka ah. Helio G90 wuxuu gaarayaa ugu badnaan 48 Mpx oo kujira hal shidma.
Xiriirinta: Moodada 12/13 4G LTE modem oo leh 4 × 4 MIMO, 3CA, 256QAM, 4G SIM ...
Mid ka mid ah riwaayadaha waaweyn ee arimahan ka jira ayaa ah soo bandhigida Hyperengine. Waa nidaam dhexe oo adeegsanaya Sirdoonka Artificial Intelligence si uu awood ugu yeesho inuu processor-ka ula jaan qaado shuruudaha ugu badan ee ciyaaraha. Sidan oo kale, waxaa la filayaa inay awood u yeelan karto inay hesho natiijo aad uga wanaagsan oo ka awood badan markasta. Sawirro tayo sare leh, xiriiro mobilo dhaqso leh, animations ka fudud iyo waxyaabo kale oo badan. Wax walba oo aan ugu baahanahay khibrad ciyaareed wanaagsan oo arrintan la xiriirta.
MediaTek ayaa isticmaashay GPU Hub Mali-G76 3EEMC4 loogu talagalay kuwaan Helio G90. Waa xulasho muhiim u ah astaanta, laakiin taasi si uun ha noqotee waa inay u malayso inaan ka helnay horumar weyn dhinaca madaddaalada. Tani waa wax summaddu ka maqnayd oo culeyskooda saarey. Sidaa darteed, waa tallaabo in laga dhigo hawl-wadeenadan inay si dhab ah u qaataan oo ay ku yeeshaan suuqa.
Waqtigaan la joogo ma ogin goorta taleefannada ugu horreeya ee adeegsada qalabkan cusub ay suuqa soo galaan. MediaTek sidoo kale lama wadaagin faahfaahinta qiimaha isku mid ah. Marka ma naqaanno waxa laga filan karo, in kasta oo aan garaneyno sumadda, ma noqon doonaan kuwa wax soo saara oo qaali ah. Marka waxay u oggolaan doontaa qaybta casriga ah ee cayaaraha inay sidoo kale nooga tagto moodallo ka jaban macnahaas. Waxaa laga yaabaa in telefoonnada ugu horreeya ee leh Helio G90 waxay imaan doonaan dhowr bilood. Shirkaddu kama aysan sheegin wax ku saabsan wax soo saarkooda, inkasta oo ay u maleyneyso inay horayba u socoto ama ku dhow tahay inay sidaas sameyso. Sideed u aragtaa processor-radan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Helio G90: processor-ka ciyaaraha ee MediaTek waa rasmi
ChessFinity waa iskudhafka ugufiican inta udhaxeysa chess-ka nolosha caadiga ah
Dhammaan qeexitaannada Nubia Z20 ayaa shaaca ka qaaday iyo shaashadeeda laba-geesoodka ah ayaa la xaqiijiyay